Jawaab: qofka isku magacaaba Maxamed jeex - Haldoor News | Haldoor News
Jawaab: qofka isku magacaaba Maxamed jeex
Ninka deggen Brussel ee isku magacaaba maxamed jeex oo beryahan dambe maqaalo qabiilaysan ku soo qora websites-ka Somaliland qaar ka mid ah. Isagoo ku jira olole uu reer gaar ah u samaynayo taariikh iyo dhul uuna lahayn. Maqaalkan ugu dambeeyey oo ku soo qoray website-yada Somaliland wuxuu cinwaan uga dhigay: xildhibanada gobolada Awdal , Salal iyo Gabiley isagoo ka hadlaya xildhibaano samaroon ah oo ka soo jeeda Boorama. Saddexdan gobol ee la israacinayo ee ayna samaroon degin (waxay ka degaan awdal kaliya) waa been abuur beryahan dambe lala soo baxay loogana dan leeyahay in la waafajiyo xeerka federaalka Somaliya ee dhigaya in saddexdii gobolba loo aqoonsan karo dawlad goboleed. Waa yaabe ma gobolo aanad degin ood iska sheeganayso ayaa ku noqon dawlad goboleed, oo soo nimanka Xamar ka taliyaaba ma oga sida Soomaalidu degaanka u kala leedahay!!!!!!
Maqaalkan aan kor ku xusay wuxuu kaga sheekaynayaa taariikhda iyo lahaanshaha district-yadii Somaliland ee waqtigii ingiriiska isagoo ka been sheegaya ujeedadiisuna tahay inuu yareeyo district -yadii Isaaqa, uu kordhiyana tirada district -yada ay reeraha kale leeyihiin. Tusaale ahaan tuulo Awbarre la yidhaa oo waqtigii ingiriiska aan waxba ahayn laakiin markii hawdka dawladda Itoobiya lagu wareejiyey ay xabashidu saldhig boolis ka samaysatay ayuu ku soo darayaa distric-yadii ingiriiska, cajiib.
Wuxuu yidhi Isaaq waxay lahayeen oo kaliya Hargaysa, Burco iyo Berbera. Ceerigaabana wuxuu siiyey reero kale, iyadoo xaqiiqdu tahay dadka dega Ceerigaabo ay 80% yihiin beesha dhexe. Haddaba waa yaabe ma wuxuu isleeyahay ninkani maqaallo yaryar oo lagu soo qoro internet-ka ayaad ku bedeli taariikhda ummadda ama aad ku yeelan gobollo aanad degin ab iyo isirna aanad u lahayn.
Amir Bidde Nuur